धादिङ २ मा एमाले केन्द्रीय सदस्य लोहनीको जितसंगै बाम गठबन्धनको क्लिनस्विप « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
धादिङ २ मा एमाले केन्द्रीय सदस्य लोहनीको जितसंगै बाम गठबन्धनको क्लिनस्विप
धादिङ । धादिङ क्षेत्र नं. २मा नेकपा एमालेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य खेमप्रसाद लोहनी विजयी भएका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवा एवं कानु तथा संसलिय मामिला राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिनलाई ६४० मतले पछाडी पार्दै लोहनी विजयी भएका हुन् । लोहनीले ३६,२५४ मत प्राप्त गरेका छन् भने पाख्रिनले ३५,६१४ मत प्राप्त गरेका थिए ।
जिल्लाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएसंगै धादिङको दुई वटा प्रतिनिधिसभा र चार वटा प्रदेश सभामा बाम गठबन्धनले क्लिनस्विप गरेको छ । क्षेत्र नं. १ मा एमाले धादिङका कार्यवाहक अध्यक्ष भुमि त्रिपाठीले देशभरको फराकिलो मतान्तरको रेकर्ड कायम गर्दै विजयी भएा छन् । प्रदेशसभा तर्फ १(१) बाट एमाले पोलिटव्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, १(२) बाट नेकपा माओवादी केन्द्र धादिङका अध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेल, २(१) बाट एमाले प्रदेश कमिटि सदस्य डा. रामकुमार अधिकारी र २(२) बाट माओवादी केन्द्र निकट ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव जगत सिंखडाले विजय हासिल गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति २३ मंसिर २०७४
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. पुष्प कँडेल नियुक्त, को हुन् कँडेल ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा.पुष्प कँडेल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बिहान
के राख्ने प्रदेश ४ को नाम ? हिमालय, गण्डकी वा मुक्तिक्षेत्र ! यस्तो आयो सुझाव
पर्वत । प्रदेश नं ४ को नाम गण्डकी, धौलागिरि वा मुक्ति क्षेत्र राख्न पर्वतका सरोकारवालाले
यसरी भयो एमाले युवा विद्यार्थीमा नेतृत्व हस्तान्तरण : युवामा रमेश, विद्यार्थीमा महेश
काठमाडौँ । एकता प्रकृयाले महाधिवेशन अनिश्चित भएपछि नेकपा (एमाले) निकट युवा विद्यार्थी संगठनमा नेतृत्व हस्तान्तरण
धनुषा । संघीय सरकारले तोकेबाहेक प्रदेश नं २ मा थप आठ दिन सार्वजनिक बिदा हुने